ओली सरकारले बल्ल जनताको पक्षमा गर्यो यस्तो निर्णय, क-कसले पाउदैछन् नगद राहत ? — Imandarmedia.com
ओली सरकारले बल्ल जनताको पक्षमा गर्यो यस्तो निर्णय, क-कसले पाउदैछन् नगद राहत ?
काठमाडाैं । सरकारले प्राकृतिक विपदमा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई नगद सहयोग गर्ने भएको छ। विपदमा एक जना सदस्यले ज्यान गुमाएमा परिवारलाई दुई लाख रूपैयाँ दिइने भएको छ। बुधबार गृह मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विपद्का घटनामा परिवारका एक सदस्यको मृत्यु भएमा दुई लाख दिने घोषणा गरेको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४’ लाई समसामयिक संशोधन गरी ‘विपद् पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ स्वीकृत गरेको हाे।
‘कुनै परिवारमा एक जनाको मृत्यु भएमा दुई लाख, सोही परिवारका अन्य व्यक्तिको पनि मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप एक लाखका दरले राहत उपलब्ध गराइने,’ गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राहत एकद्धार नीतिमार्फत उपलब्ध गराइने तर एकाघर परिवारका सबै सदस्यको मृत्यु भएमा भने सोको राहत कसैलाई उपलब्ध गराइने छैन।
विपदका घटनामा परी खाद्यान्न तथा हाल बसोबार गरिरहेको घर पूर्ण रुपमा नष्ट भएमा वा नयाँ क्षतिपछि घर निर्माण गर्नुपर्ने र अर्को स्थानमा बसोबार गर्ने घर नभएको अवस्था भएमा प्रतिपरिवार १ लाखसम्म उपलव्ध गराइने भएको छ। राहत वितरण गर्दा सुत्केरी, गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामी र अपांगता भएकालाई प्राथमिकता दिई वितरण गर्ने पनि गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैबीच नेपालमा बुधबार थप २ जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । योसँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ४२ पुगेको छ ।
आज थप २ जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको पुष्टिसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या ४२ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ